Viva Air inotangisa nzira yakananga kubva kuMiami kuenda kuSanta Marta, Colombia
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Airlines » Viva Air inotangisa nzira yakananga kubva kuMiami kuenda kuSanta Marta, Colombia
Airlines • nhandare yendege • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Colombia Breaking News • nhau • ushanyi • kutakura • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • USA Kuputsa Nhau
Mutakuri wemutengo wakaderera Viva Air yakazivisa nzira itsva yakananga yepasi rose pakati peMiami neSanta Marta, Colombia. Iyi ndiyo ichave nzira yekutanga yakananga yakambopihwa pakati pemaguta maviri aya. Mitikiti iripo kuti ubhuke, nendege dzekutanga dzichibva muna Zvita 18, 2018.
“Tinofara kuzivisa nzira yedu nyowani yepasi rese Miami-Santa Marta-Miami. Mugore rekutanga tinotarisira kutakura vatengi vanodarika zviuru makumi matatu nezvitatu, tichivapa mukana wekuenda kuColombia nemari yedu yepasi, ”akadaro Felix Antelo, CEO weViva Air
Viva Air ichaita nendege nhatu pavhiki pakati peMiami neSanta Marta neChipiri, China, neMugovera na3: 10 mangwanani. Ndege yakapa nendege yakananga kubva kuMiami kuenda kuMedellin kubva Zvita 38, yakatakura vanopfuura zviuru zana nemakumi mashanu.
Nemugwagwa mutsva uyu, Viva Air ichabatanidza dunhu ichi iwedzere kumisikidza Colombia senzvimbo huru yekushanya kune vafambi veUS.